विश्रामपछि 'प्याक' सौगात, भन्छन्- हामी स्क्रिप्टमा कमजोर छौं
मनोज न्यौपाने | २०७६ बैशाख ९ सोमबार | Monday, April 22, 2019 ०८:०३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- लामो समयसम्म नेपाली रंगमञ्चमा उपस्थिति जनाएपछि ठूलो पर्दामा जादु चलाउन सफल हुने अभिनेता हुन् सौगात मल्ल।
फिल्म लुटमा ‘हाकु काले’को क्यारेक्टरले दिलाएको लोकप्रियतासँगै सौगातको चर्चा चुलिएको हो।
भर्सटाइल कलाकारका रूपमा हेरिएका सौगातले गत भदौबाट प्रदर्शनमा आएको 'जय भोले'बाट अभिनय यात्रामा ब्रेक लगाए। निर्माता निर्देशक र फिल्म बजारमा खोजिने व्यक्तिमध्येका एक मल्लले आखिर एकाएक अभिनयबाट किन ब्रेक लिए त?
नेपाल लाइभको उक्त जिज्ञासामा मल्लले भने, ‘आफूले सोचेजस्तो फिल्म र स्क्रिप्ट आएका थिएनन्। अर्कातिर २०७५ र त्यसअघि मैले धेरै फिल्ममा काम गरिसकेको थिएँ। त्यो कारणले मैले ब्रेक लिएको हुँ।’
अभिनयमा धेरै नै ब्यस्त बन्नु परेको कारण देखाउदै उनले थपे, ‘केही प्रोजेक्टहरु आए तर तिनिहरुलाई स्क्रिप्टका हिसावले अझ बलियो बनाएर मात्र काम गर्ने सोचका कारण बर्ष २०७६ का लागि प्रोजेक्टहरु सारेको थिएँ।’
सौगातले भनेजस्तै सन् २००८ मा फिल्म ‘कागबेनी’बाट ठूलो पर्दामा देखिएका सौगातले त्यसयता करिब ३० वटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। तर सौगात जति फिल्म गरे पनि ‘लुट’मा पाएको चर्चा अन्य फिल्मबाट भने पाउन सकेनन्।
अझ व्यावसायिक असफलताको चङ्गुलमा फसेको नेपाली फिल्म बजारमा सौगातको अभिनयमा रहेका फिल्म पनि एकपछि अर्को गर्दै असफल हुन थाले। यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ सौगातले केही समयको विश्राम लिनुमा।’
सौगातले विश्राम लिनुमा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठसँगको प्रेम सम्बन्ध पनि कारक भएको भनी विभिन्न गसिप समाचार बजारमा आए। तर सौगात भने यस कुरालाई मान्न तयार छैनन्।
यस्ता गसिप आउनु सामान्य भएको भन्दै कतिपय समाचार बिकाउनकै लागि अन्टसन्ट लेखिने गरेको समेत आरोप लगए। प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘त्यो त उहाँहरुले केही बिक्ला भन्ने हिसाबमा लेख्नुभएको होला। लेख्ने काम हो लेख्नु भयो होला तर विश्राम लिनुभन्दा अघिबाट नै सृष्टि र म सम्बन्धमा थियौं। आ-आफ्नो हिसाबले काम पनि गरिरहेकै थियौं। हाम्रो भेट भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो। यतिका वर्ष म खाली बसेको त थिइनँ होला?
सौगातले अभिनयबाट विश्राम लिएका बेला सृष्टिसँग घुमेका तस्बिरले फिल्म बजार गर्माएको थियो। यो प्रसंग कोट्याउँदा उनले थपे, ‘फिल्म 'लक'ले चल्छ भन्ने भ्रम छ यहाँ। तर स्क्रिप्ट र स्क्रिन प्लेमा हामी धेरै नै तल खस्किएका छौं। यसकारण केही सुधार भएर मात्र आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म थप ग्रुमिङमा लागेको पनि हुँ। खाली समयमा यसो फ्रेस हुन घुमफिरमा निस्केका हौं। मलाई प्रकृतिसँग रमाउन पनि एक खालको मज्जा लाग्छ।’
तर २०७६ सालमा भने आफू पूर्ण व्यस्त रहेको सुनाउँछन् सौगात। भन्छन्, ‘यो वर्षका लागि म सँग निकै फिल्म आइपुगेका छन्। ठ्याक्कै यति नै संख्यामा छन् भन्न त सकिँदैन। तर जेठबाट तिहारसम्म प्याक छु।’
उनले भनेजस्तै सौगात यसै हप्तामात्र २ वटा फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका छन्। फिल्म हुन् ‘पोइ परो कोले’ र ‘राम राम’।
यी फिल्ममा कस्तो क्यारेक्टरमा सौगात देखिने छन्, त्यस विषयमा भने अहिले नै बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘फिल्मको पूरा खाका अझै तयार भईसकेको छैन। त्यसैले यस्तो नै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। क्यारेक्टरका बारेमा अहिले नै खुलाउन उचित पनि हुन्न होला। तर जहाँसम्म अनुबन्धित भएको छु पक्कै पनि फिल्मको स्क्रिप्ट राम्रो लागेर नै काम गर्न लागेको हुँ।'
संयोग नै भन्नुपर्छ सौगातले काम गर्न लागेको फिल्म ‘पोइ परो काले’मा सृष्टि श्रेष्ठ पनि अनुबन्धित छन्।
सृष्टिलाई नै किन?
सौगातले भने, ‘सृष्टिले स्क्रिप्टअनुसार दृश्यमा न्याय गर्न सक्छिन्। त्यो यसअघि पनि प्रमाणित भइसकेको कुरा पनि हो। बाँकी कुरा कुनै फिल्मका लागि कसैले अभिनेत्रीका बारेमा सल्लाह लिन्छ भने मैले सृष्टिलाई 'रिकोमेन्ड' गर्नु अस्वाभाविक पनि हुन्न। निर्माण युनिटबाट 'फिल्ममा सृष्टि हुँदा अप्ठ्यारो त हुन्न होला नि!' भनेर सोध्नुभएको थियो। मैले 'केही हुन्न, उसलाई स्क्रिप्ट मन पर्‍यो भने ठिकै छ भनेको हुँ'। बाँकी उहाँहरु दुई पक्षबाट नै मिलाइएको हो। म बीचमा छैन।’
अनि विवाह चाँही कहिले गर्ने?
‘मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो। हामी सम्बन्धमा छौं,' उनले भने, 'यस विषयमा धेरै बोलिनु र लेखिनु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै लेखिएको पनि मलाई मन पर्दैन। ठ्याक्कै यही समय नभए पनि विवाहको मिति नजिकिँदै छ।’